Tresaka Archives - Page 97 sur 136 -
« Ny tody tsy misy… »
07/07/2017 admintriatra 0
Mitovitovy tamin’ny fomba fitondran’i Yaya Jammeh tao Gambie ny didy jadona nataon-dRavalomanana Marc teto fony izy mbola teo amin’ny fitondrana. Izay nihetsika rehetra, na mpanohitra io, na mpandraharaha, na mpanao gazety, na iza dia tratran’ny …Tohiny
« Ampy izay »
06/07/2017 admintriatra 0
Sao mbola manonofy antoandro aza ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ka mbola mihevitra ny tenany fa mbola filoha, ka izay tiany hatao no tanterahina eto ? Nahagaga tokoa mantsy ny nahita azy nanentana an’ireo mpomba …Tohiny
04/07/2017 admintriatra 0
Hanokatra fanadihadiana momba ilay horonam-peo nivoaka tany amin’ny tambazotra, hono, ny tale jeneralin’ny Bianco araka ny vaovao re. “Tara loatra e!”. Inona intsony no ilàna izany? Efa voahoso-potaka tanteraka mialohan’ny fitsarana azy aloha ilay olona …Tohiny
«Mandika lalàna mihitsy!»
03/07/2017 admintriatra 0
Efa tsy resaka ady amin’ny kolikoly intsony ny olana eo amin’i Claudine Razaimamonjy sy ny Bianco fa fankahalana sy “alako bika tsy tiako tarehy”. Mahavita “mandika lalàna” mihitsy ny Bianco amin’izao fotoana izao mba hamotehana …Tohiny